दुर्गेश थापाको ‘सरप्राइज’: बिहे भन्दा छोरो पहिले सार्वजनिक ! —
दुर्गेश थापाको ‘सरप्राइज’: बिहे भन्दा छोरो पहिले सार्वजनिक !
११ माघ २०७७, आईतवार ११:५१ admin	0 Comments
दुर्गेश थापा चर्चित गायक तथा मेडल हुन् । पछिल्लो समय स्टेजमा उनको माग निकै हुने गर्छ । उनले गाएका गीत युट्युब ट्रेन्डिङमा आउँछन् । उनै गायक दुर्गेश थापालाई पुत्र लाभ भएको छ । उनकी धर्मपत्नी प्राची लामाले शनिबार बिहान करिब ८ बजे सन्तानलाई जन्म दिएकी हुन् ।
काठमाण्डौको ह्याम्स अस्पतालमा प्राचीले छोरालाई जन्म दिएको गायक थापाले बताए । उनले भने–‘आमा र छोरा दुबैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ ।’
दुर्गेश र प्राचीले बिहे गरेको एक बर्ष भयो । तर, यो जोडीले बिहेको खबरलाई सार्वजनिक गरेको भने थिएन । पछिल्लो केही महिनादेखि भने दुर्गेश र प्राचीले आफूहरुको सम्बन्धलाई सामाजिक संजालबाट खुलाउने प्रयास गरेका थिए ।
दुर्गेशले केही महिना अगाडि प्राचीको जन्मदिनमा शुभकामना व्यक्त गर्दै दुईको सम्बन्ध खुलाएका थिए । दुर्गेशले भने–‘हो, हामीले बिहेको खबरलाई खासै बाहिर ल्याएका थिएनौ । गतबर्षबाट मात्र हो, हामी खुल्न थालेको ।’गायक थापा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चामा छन् । उनले गाएका ‘डन आयो डन, विच्च विच्चमा’ लगायतका गीत चर्चित छन् ।
← तस्बिरमा हेर्नुहोस् मुख्यमन्त्री राई र मोडल जाङ्मुको विवाह
अष्ट्रेलियामा डेन्टल असिस्टेन्टको जागिर र तलब थाहा पाइराखौ ! →
गायिका शान्तीश्री लाइ पुत्री लाभ, सामाजिक संजालमा शुभकामनाको ओइरो !
१० माघ २०७७, शनिबार १५:२२ admin	0
अभिनेत्री आँचल शर्माले गरिन धुमधाम सँग विवाह (तस्बिर सहित)
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १४:५३ admin	0
लोकप्रिय गायक स्वरूपराज आचार्यको आज जन्मदिन
१२ पुष २०७७, आईतवार ०९:१३ admin	0